को हुन् बेनिशालाई नगरकोट जाउँ भन्ने बैंकका सीइओ ? #metoo – Mero Film
को हुन् बेनिशालाई नगरकोट जाउँ भन्ने बैंकका सीइओ ? #metoo
कुनै पनि व्यक्ति माथि कुनै पनि स्थानमा यौन जन्य हिंसा हुन सक्छ । चाहे त्यो कार्य क्षेत्रमा होस् या सार्वजनिक स्थलमा । त्यसका बारेमा कतिपयाले प्रतिकार गर्छन् त कतिपय चुपचाप निरिह भएर बस्छन् । बोल्नेहरुले पछिल्लो समय अभियान चलाएका छन् #metoo.
कसरी सुरु भयो #metoo ?
सन् २००६ मा अमेरिकी सामाजिक अभियान्ता ताराना बुर्केले सामाजिक संजाल माई स्पेस मार्फत metoo वाक्यांशको प्रयोग सुरु गरेकी थिइन् । उनले यौन शोषण वा उत्पीडनमा परेका महिलाहरुका बिचमा ‘सहानुभुतीका माध्यमबाट सशक्तिकरण’ अभियानलाई प्रचार प्रसार गर्नकालागि metoo वाक्यांशको प्रयोग सुरु गरेकी थिइन् । तत्पश्चात यस अभियानले बिस्तारै भाइरल रुप धारण गर्दै गएको छ ।
अक्टोबर १७मा यौन उत्पिडनको आरोप लागेका भारतका विदेश राज्यमन्त्री एमजे अकबरले राजीनामा समेत दिए । भारतीय फिल्म उद्योगमा भने मल्यालम फिल्म क्षेत्रबाट यो अभियान को सुरुवात भएको हो । मल्यालम पछी बल्ल बलिउडमा metoo अभियान प्रवेश गर्यो । पहिलो पटक बलिउडमा नायिका तनुश्रीले अभिनेता नाना पाटेकरले आफु माथि यौन हिंसा गरेको आरोप लगाएकी थिइन । अभिनेत्री राखी सावन्तले पनि तनुश्रीले अफुमाथी बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । बिग बोसकि पुर्व प्रतिस्पर्धी पुजा मिश्राले अभिनेता सलमान खानसंगै उनका दुई भाईले आफु बेहोस भएको बेला बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । पछिल्लो समय भारतमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आफु माथि यौन हिंसा भएको भन्दै सामाजिक संजालमा #metoo लेख्दै आवाज उठाउन थालेका छन् ।
मिटू मुभमेन्टले नेपालमा पनि पाइला चालेको छ । भारतका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको नाम मुछिने क्रम जारी छ । मि टु अभियानको समर्थनमा केही साता अघि नेपाली महिला पत्रकाहरुले पनि आफू विरुद्ध भएको यौन हिंसाका बारे सामाजिक संजाल मार्फत बोल्न सुरु गरेका थिए । मि टु मुभमेन्टमा सहभागी हुँदै पत्रकार रश्मिला प्रजापतीले काठमाडौं महानगरपलिकाको पुर्व मेयर केशव स्थापितले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको कुरा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छिन् । यसअघि यो मुभमेन्टमा सहभागी हुँदै पूर्व सञ्चारकर्मी मीना कैनी, फिल्मकर्मी एवम् डकुमेन्ट्री मेकर सुविना श्रेष्ठ, बिम्मी कालिन्दा शर्माले सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टका विषयमा बोलेका थिए ।
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा #metoo बारेमा को को ले बोलेका छन् ?
बलिउडमा जस्तै नेपाली फिल्म क्षेत्रमा कुनै पनि घटना बाहिर नआए पनि केहि समय अगाडी फिल्म सायद २का निर्माता सुनिल रावलले उक्त फिल्मकि नायिका स्यारोन श्रेष्ठमाथि यौन हिंसा गरेको खबर बाहिरिएको थियो । नायिका श्रेष्ठ स्वयम्ले उक्त कुरा मिडियालाई बताएकी थिइन् तर पछी निर्माता रावल र उनी बिच सम्झौता भयो र त्यो घटना त्यत्तिकै सेलाएर गयो । केहि बर्ष अगाडी म्युजिक भिडियो निर्देशक मुनाल शिशिरले आफुलाई यौन प्रस्ताव राखेको भन्दै मोडेल आयुषा राईले सामाजिक संजालमा लेखेकी थिइन् । त्यस्तै मोडल ममता प्रधानले पनि आफु माथि यौन हिंसा भएको खुलासा गरेकी थिइन् ।
अहिले आएर नेपाली फिल्म क्षेत्रमा कृयासिल केहि नायिकाहरुले metoo मुभमेन्टका बारेमा बोल्न थालेका छन् । नायिका केकी अधिकारी, रीचा शर्मा, बेनिशा हमाल, रीमा विश्वकर्मा, सुरक्षा पन्त लगायतले यसको बिषयमा सामाजिक संजालमा लेख्न थालेका छन् । नायिका त्रय केकी रीमा र बेनिशाले रमाइलो छ डटकममा एक अन्तर्वार्ता दिँदै सो बिषयमा खुलेर बोलेका छन् । उक्त अन्तर्वार्तामा नायिका बेनिशा हमालले आफूमाथि यौन जन्य प्रस्ताव आएको र त्यसको प्रतिकार गरेको खुलाएकी छन् ।
उनले भनेकी छन् एक बैंकको लागि गरिएको फोटोसुट सकिए लगत्तै कफी खाने क्रममा सो फोटोसुटका कोर्डिनेटरले बैंकका सीईओले नगरकोट जाने भनेको भन्दै आफुलाई प्रस्ताव राखेको र उक्त प्रस्ताव राख्ने व्यक्तिलाई आफुले चड्कन हानेको बताएकी छिन् । कार्यक्रम प्रस्तोताले उनलाई उक्त व्यक्ति, बैंक वा सीइओ को नाम खुलाउन मिल्छ भनेर गरेको प्रस्नको जवाफ दिँदा अनकनाउँदै बिनेशाले आफुलाई याद नभएको बताएकी छिन् । बेनिशाले अगाडी कुरा गर्दै भनेकी छन् उक्त समयमा म मा त्यति हिम्मत थिएन कि यो कुरा मेरो परिवारलाई सेयर गर्न सकुँ । कहाँ, कसलाई के भन्ने भन्ने बारेमा आफु अनविज्ञ रहेको उनले बताएकी छिन् । परिवारले त्यही देख्नका लागि यो फिल्डमा गएको होइन भनेर गालि गर्ने डरका कारण उक्त कुरा भन्न नसकेको उनको भनाई थियो । मजाको कुरा यो छ कि उनि अहिले पनि यहि क्षेत्रमा सकृय छिन् र पहिले गालि गर्ने परिवारले अहिले पनि गर्न सक्छन् । पहिले बोल्न नसकेकी बेनिशा अहिले किन बोलिरहेकी छिन् ? के उनलाई त्यति बेला करियर धरापमा पर्ने डर थियो ?
हुन त जमाना बदलिएको छ । मानिसले हरेक क्षेत्रलाई बुझ्न थालेको छ । उनले पनि धेरै बुझिन् र बोल्न सक्ने भईन् होला तर आफु माथि भएको उक्त दुर्व्यवहार याद गरेकी बेनिशाले कुन बैंक, को र कसको लागि फोटोसुट गरेको भन्ने नै याद नगरी काम गरेकी रहिछन् । या उनले उक्त व्यक्ति वा बैंकको नाम खुलाउन चाहिनन् त्यो त उनलाई नै थाहा होला । तर घटना याद हुने मानिसलाई पक्कै कसको लागि काम गरेको थिएँ भन्ने पनि याद हुनै पर्ने हो । आखिर बेनिशाले उक्त व्यक्ति या बैंकको नाम भन्ने किन अनकनाइन् ?
किन खुलाउँदैनन् नाम ?
जसले जे बोले पनि घटनाका बारेमा बोलेका छन् । तर एकाधलाई छोडेर जातिले बोलेका छन् म माथि यस्तो भएको भनेका छन् तर कसले, किन र कुन अवस्थामा आफु माथि दुर्व्यवहार गर्यो भन्ने खुलाएका छैनन् । आखिर किन खोलिदैन सम्बन्धितको नाम ? यसको पछाडी के कारण हुन सक्छ ?
नेपाल विकासोन्मुख देश हो । कुनै पनि क्षेत्र बिकशित छैन । ढलमल ढलमल गर्दै हरेक क्षेत्र अगाडी बढ्दै गएको छ । बेरोजगारीले पिसुल्टिएको छ । पाएको अवसर गुमाउने डरले नेपालमा महिला वा पुरुष कसैले पनि आफु माथि भएको दुर्व्यवहारका बारेमा खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । नेपाली मनोरन्जन क्षेत्र पनि यो कुराबाट अछुतो छैन । अवसर कम र प्रतिस्पर्धा ज्यादा हुँदा को भन्दा को कम भन्दै अवसर प्राप्त गर्न खोज्ने मेसोमा पनि कति पय यस्ता यौनजन्य घटनाहरु घटेका छन् ।
कतिपय अवस्थामा महिलाले छोटो समयमा चर्चा कमाउने वा अवसर पाउन कै लागि यस्ता कृयाकलापमा सहभागी हुने गरेका छन् । अवसर पाउने बोल्दैन अनि नपाउनेले इर्स्या बोकेर यस्ता कुराहरु बोल्ने गरेको जानकारहरुको भनाई छ । नायिका सुरक्षा पन्तले यही कुरालाई इंकित गर्दै फेसबुक स्टाटस लेखेकी छिन् । छोटो बाटोबाट सफलता हाँसिल गर्ने सोच बोकेका ति महिलाहरु जो जानी जानी त्यस्ता क्रियाकलापमा सहभागी हुन्छन् उनीलाई पनि metoo मुभमेन्टले दवाव सिर्जना गर्ने उनले उल्लेख गरेकी छिन् । त्यसले गर्दा सक्षम व्यक्ति अझै बलियो हुने उनको भनाई छ ।
metoo का बारेमा आफ्नो भनाई राख्दै अग्रज पत्रकार तथा फिल्म लेखक सामिप्य तिमल्सेना भन्छन्, ‘कसैलाई पनि कसैको इच्छा विपरित जबर्जस्ती गर्न पाइँदैन । तर मनोरञ्जनको क्षेत्रमा महिलामाथि ज्यादा शोषण भइरहेको कुरा बेलाबखत उठ्ने गरेका छन् ।
केही समय पहिले शुक्रबार साप्ताहिकले गायक संगीतकारको शोषणमा परेका महिलाको कुरालाई सार्वजनिक गरेको थियो । पछिल्लो समय नेपालका स्थापित हिरोइनले पनि आफूमाथि यौन शोषणकोे प्रयास भएको बताएका छन् । तर आरोप लगाउनेहरूले बुझ्नु पर्ने कुरा, कसैका विरुद्धमा बोल्दा आफूसँग त्यो आरोपलाई पुष्टि गर्ने तथ्य पनि हुनपर्छ । नत्र यसले पीडित स्वयंलाई प्रश्नको कठ्घरामा खडा गरिदिन्छ । हलिउड-बलिउडको केस स्टडी यता फिट हुन्न । त्यसैले बोल्नेले विचार गर्नुपर्छ ।’
पत्रकार जीवन पराजुली भन्छन्, ‘metoo हलिउड, बलिउड हुँदै नेपाल भित्रिएको छ । यो एउटा फेसन जस्तो लाग्छ मलाई । जसको कुनै अर्थ नै छैन । किन भने जो भिक्टिम हो भान्छ उ आफु नै फसिरहेको अवस्था छ बाहिर पनि र नेपाल पनि त्यो निश्चित छ । किनभने कसैलाई आरोप लागि सकेपछी त्यो व्यक्तिले त्यत्तिकै छोड्दैन । हिजो यस्तो भएको थियो, अस्ति उस्तो भएको थियो, उहिले यस्तो भएको थियो तर नाम भन्दिन भनेर हुँदैन । प्रमाण चाहिन्छ । जब प्रमाण छ भने metoo नै चाहिँदैन कानुनले काम गर्छ, कानुन नै काफी छ त्यसको लागि ।
नेपालमा केही व्यक्ति, विषेश गरि केही नायिकाहरुले metoo को समर्थन गरिरेका छन् । तर जसले बोलिरहेका छन् उनीहरुले आफ्नो कुरा चाहिँ बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् । उरुलाई चाहिँ अगाडी आउनुहोस् भनिरहेका छन् । तर त्यस्तो होइन । पहिले आफुलाई भएको दुर्व्यवहारको घटनालाई अगाडी ल्याएर अनि बल्ल अरुलाई पनि अगाडी बढ्न भन्ने हो । तर यहाँ के देखियो भने आफु चाहिँ नबोल्ने तर अरुलाई उक्साउने । आफ्नो कुरा चाहिँ नभन्ने तर अरुलाई उक्साएर अभियान्ता बन्न खोजेको जस्तो देखियो पछिल्लो समय केही नायिकाहरुको गतिबिधी हेर्दा । त्यसले सोझालाई फसाउन पनि सक्छ । यदी आफु माथि दुर्व्यवहार नै भएको हो भने metoo भनेर हिड्न नै पर्दैन कानुनको सहायता लिए पुग्छ ।’
आफु माथि जस्तो सुकै दुर्व्यवहार भएको होस् त्यसको बारेमा बोल्ने हिम्मत सबैमा हुनु जरुरी छ । पिडितले न्याय पाउनु र पीडकले सजाय पाउनु आवश्यक छ । होइन भने सामाजिक संजालमा बोलेर मात्रै केही पार लाग्नेवाला पक्कै छैन । जसरी बेनिशाले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भनेकी छिन् भविष्यमा उक्त व्यक्तिको नाम खुलाउने सामर्थ्य पनि राख्नु जरुरी छ ।
पछिल्लो समय कानुन बलियो भएको छ । आफु माथि साँच्चै दुर्व्यवहार भएको हो भने उक्त व्यक्तिलाई कानुनि प्रक्रियामा ल्याउने कसरत बेनिशाले गर्नैपर्छ । होइन भने प्रश्न बेनिशालाई नै नतेर्सिएला भन्न सकिन्न । बिनिशा जस्तै पिडित धेरै होलान् । बेनिशाले बोल्ने साहस त गरिन् तर नाम खुलाउन सकिनन् । त्यसो हो भने बेनिशा माथि हिंसा भएको हो भनेर मान्ने आधार के ? बेनिशा जस्तो जिम्मेवार र सामाजिक प्रतिष्ठा कमाएको व्यक्तिले त खोल्न सक्दैन भने साधारण व्यक्तिले त्यो हिम्मत कसरी गर्ला । सामाजिक संजालको विकासले मानिसमा चेतना दुई थरिनै ल्याएको छ सकारात्मक र नकारात्मक । भोलि हचुवा प्रवृत्ति विकास नगर्ला भन्न सकिएला र ?
अन्तर्वाताको १५ मिनेटको समयमा बेनिशाले आफु माथि भएको दुर्व्यवहारको बारेमा बोलेकी छिन् :
तस्बिर / भिडियो सौजन्य : रमाइलो छ डट कम
२०७५ कार्तिक ११ गते ११:०६ मा प्रकाशित